Noocyada cagaarshowga la boodo, gargaarka koowaad ee loogu talagalay sumowga
Agaric malabka boqoshaada waa ay jecel yihiin oo dhan. Noocyada lagu sharaxay suugaanta iyo internetka waxay ka kooban yihiin qiyaastii 22 noocyo kala duwan, inkastoo guud ahaan la aqbalo in ay jiraan 34 nooc oo agar ah. Xannaanadani waxay koraan ku dhowaad dhammaan sanadka oo dhan. Waxay ku koraan dogobka geedaha, waxay ku koraan qoysaska dushiisa, gaar ahaan cayayaanka.
Boqoshaada Honey waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah boqoshaada ugu caansan agaric. Dabcan, qaabka la qaboojiyey ama la kariyay, waxay si fudud ugu iibsan karaan dukaanka, laakiin mushahaarka koray ee xaaladaha dabiiciga ah ma aha dhadhan isku mid ah iyo caraf ud sida xaywaanka kaynta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u fahamto waxa boqoshaada ay tahay in la ururiyo oo cuno iyaga oo aan halis galin noloshooda.
Qodobbada waxtarka leh iyo waxyeelada leh ee boqoshaada boqoshaada
Milixyada dhabta ah (Lactarius resimus) - boqoshaada caanaha leh caanaha dhuxusha waxay ku koraan kooxo. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa cayriin, caddaan, pravskie ama qoyan. Ku koraan inta badan agagaarka geedaha cawska, samaynta mycorrhiza - marka mycelium fungus ka jira xididdada geed. Maqaarka fangaska waa caddaan, caleemo jilicsan oo qoyan, qoyan, daboolan leh xabo, oo leh aag isku xiran.
Magaca mugdi cad oo laga helay taariikhda hore. Ka dibna dadka inta badan la qalajiyo boqoshaada. Sumadda cad ee fangas cad waxay marwalba si cad u caddeyneysaa ka dib markii lagu qalajiyo ama daaweynta kuleylka. Tani waxay ahayd sababta magacan. Caleemaha caddaanku waxay ku xiran yihiin caleemaha Boletus, sidaas darteed magaca labaad ee fangas cad ayaa ah boletus. Waa muhiim! Ka dib marka la ururiyo boqoshaada, waxaa lagama maarmaan ah in si deg-deg ah loo bilaabo iyaga oo maareynaya, maaddaama miro-cadaanku ay si dhaqso ah u lumiyaan guryahooda.
Sidee loo gooyaa boqoshaada caanaha xilliga qaboobaha: qalajinta, salting, qaboojinta
Dhibaatada kulul ee qadhaadhka ah iyo cufnaanta caanaha cabitaanka ayaa abuuraya dhibaato badan oo ka yimaada xafladaha jikada, gaar ahaan marka la diyaarinayo jiilaalka. Waxaan rabaa in aan ka takhaluso qadhaadhka sababa caanaha caanaha ah, isla markaana isla markaasna ay sii wadaan adkeyntooda asalka ah. Inkasta oo sifooyinkaas iska hor imaadka ah ee boqoshaada, haddana waxay weli heleen meel ay ku jiraan suxuuno badan.
Guryaha waaweyn ee isku dhafan oo isku dhafan, waxaad ka heli kartaa boqoshaada, taas oo inta badan, waxay ku koreysaa xayawaanka, sidaas awgeed magaca - flyworm. Waxaad la kulmi kartaa bilowga xagaaga illaa dhammaadka dayrta. Dhammaan noocyada kala duwan ayaa loo tixgeliyaa la cuni karo, laakiin waxay ku wareersan yihiin khiyaano aan caadi ahayn - duurjoogta. Tani waxay noqon doontaa maqaalkeena, sida, sida loo kala saaro duuliyaha dhabta ah ee ka yimaada hal sun ah iyo haddii ay noqon doonto mid la cuni karo ama aan la heli karin.
Haddii aad rabto inaad ku korto qolofta guriga, waxaad u baahan tahay inaad marka hore isweydiiso su'aalaha: maxay tahay iyo maxaad u leedahay? Ka dib oo dhan, si ay u bixiyaan casho quruxsan qoyska, sanduuqyo yar oo ku yaal dhulka hoostiisa ama sariiraha beerta ayaa ku filan. Laakiin haddii aad go'aansato inaad abaabulato wax-soo-saarka ballaaran, waxaad u baahnaan doontaa oo keliya meelaha ballaaran, qalab gaar ah, laakiin sidoo kale qalab, qalab, qiimo wax ku ool ah iyo kharashka shaqada, iyo weliba aqoonta.
Champignons ayaa muddo dheer qaadanayay boos adag oo ay ka helaan cuntada dad badan. Waxay yihiin dhadhan fiican, si sahlan loo diyaariyo oo la awoodi karo: waxaad ka iibsan kartaa ku dhawaad ​​dukaanka cuntada. Laakiin haddii aad weli go'aansato inaad is-daaweysid naftaada iyo kuwa aad jeceshahay leh boqoshaada guri-dabiiciga ah, waxaad u baahan doontaa aqoon iyo dadaal.
Noocyada saliidda iyo astaamaha
Xitaa mishiinka musqusha ee aan khafiifka ahayn waligiis iskuma dhex darin boqoshaada noocyada kale, maadaama ay magacoodu iska hadlaan: dhammaan noocyada noocyada noocaan ah waxay leeyihiin maqaarkiisa. Boqoshaada Boletus tiro ka badan 40 nooc oo kala duwan. Guud ahaan, fangaska tufaaxa ee reer Boletov waxaa loo yaqaan 'buzzers'. Waxay inta badan ku koraan kalluunka qallafsan, isku dhafan iyo geed-geedeed, laakiin, intaa waxaa dheer, waxaa laga heli karaa meel kasta oo ka mid ah meeraha, taas oo lagu tilmaamayo cimilada dabiiciga ah, iyo xitaa Afrika iyo Australia.
Qeexida noocyada moorarka
Ereyga "gruzd" ee tarjumaadda ka timaada Church Slavonic macnaheedu waa "cidhib". Wali lama yaabin in ay magacaas ku soo iibsadeen. Waqtiyadii hore ee Ruushka, dadka soo iibsada musqulaha ayaa soo ururiyay baabuurtooda oo cusbaynaya foosto. Dhammaan noocyada qaamo-qashiirta waxay isku daraan sifooyinka caadiga ah: siddooyinka isku dhafka ah ee daboolka ah ayaa la arkaa, qaabkuna wuxuu isbeddelaa koritaanka fungus - marka hore waa miisaan iyo ka dibna hindhisada-qaabeeya geesaha hooseeya.
Maslata - boqoshaada ugu caansan ee ka mid ah soo iibsadaha boqoshaada iyo taageerayaasha kaliya ee sheygan. Sidaa darteed maahan mid la yaab leh in ay jiraan cuntooyin iyo habab badan oo loogu diyaar garoobayo. Oo marti-geliyeyaashu waxay ku faani karaan, iskuduwaha shakhsi ahaaneed. Waxaa sidoo kale jira siyaabo badan oo loo gooyo saliid xilliga qaboobaha. Saliidaynta Qaabka ugu fiican ee boqoshaada goosashada jiilaalku waa qalajinta, taas oo aan wax u dhimaynin tayada nafaqada iyo dhadhanka sheyga.
Sanado badan, dadku waxay soo aruuriyeen doofaarro waxayna jecel yihiin dhadhankiisa iyo dhadhanka diyaarinta. Dadka wax soo saarka ah ee qibrada leh waxay ku adkaysanayaan in boqokankani ay gebi ahaanba ammaan yihiin, waa ku filan inay karkariyaan iyaga oo adkeynaya ka hor intaan la karin karin. Marka la barbardhigo bayaankan, waxaa jira ra'yi ku saabsan khatarta iyo qadiimka ah ee hadiyadaha kaynta.
Suurtogal maaha in la cuno likaha caanaha madow: sida loo kala saaro likaha dhabta ah ee mid been ah
Boqolkiiba caanaha waa boqoshaada oo si gaar ah ugu caan ah kubbadaha. Kaynta, oo ay ku jiraan boqoshaada caanaha, waa raad dhabta ah ee wax lagu kariyo. Inkasta oo ay caan ku yihiin, Gordiyayaashu waxay ka qariyaan indhaha aadanaha waxayna ku qariyaan caleenta meel u dhow mugdi iyo hillocks kala duwan. Sidaa daraadeed, adigoo raadinaya noocyada noocan ah ee mycobionts, waxaa fiican inaad qaadato adigoo si joogto ah u baaraya dhammaan meelaha ay boqoshaada caanuhu koraan.
Svinushka musqusha waa mid aad loo jecel yahay oo si fiican loo yaqaan oo loo yaqaan 'picky mushroom. Waxay u muuqaneysaa muddo dheer ka hor inta aan boqollaalka kale iyo fara badan oo kala gedisan ilaa dayrta goor dambe. Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay sharaxaadda dibadda, boqoshaada svinushka waxay u eg yihiin dhegta doofaarka. Tani waxay u muuqataa mid lagu arko kabaha sii kordhaya ee fangaska. Sababta tani waxay ahayd lugta, kaas oo aan ku lifaaqneyn xariiqda fangaska, laakiin barokacay.
Marka ugu horreysa waxaan barannaa waxa aan kakooban yahay fasalka bayoolajiga, laakiin qaar badani si buuxda uma fahmin sababta ay muhiim u tahay inay koraan iyo waxa ay isticmaalaan. In this article waxaan fiirin doonaa sida loo koro mycelium of fungi, faahfaahinta mycelium sii kordhaya, iyo marka hore oo dhan waxaan u eegi doonaa waxa waxa loogu talagalay. Waa maxay mycelium iyo sababta ay u koraan, inta badan mycelium waxaa sidoo kale loo yaqaan 'mycelium', aynu aragno waxa ay tahay.
Mushahar aad u badan oo la cuni karo waxay la mid yihiin kuwa sunta ah, waana ay adkaan kartaa in la kala saaro xitaa iyada oo xittaa soo iibsadaha boqoshaada. Tusaale ahaan, cirbadaha waxay leeyihiin tiro isku mid ah oo la mid ah khadadka, waxayna badanaa isku jahwareeraan, ururinta hal sadar. Waxaan ka hadli doonaa kala duwanaanshaha caqiidooyinka iyo khadadka qodobkan. Morel caadi ahaan: sharaxaadda Morel (lat.
Boqollaal qasacadaysan xilliga qaboobaha ee guriga dhexdiisa ... Waxaa jira cuntooyin badan oo ku filan oo loogu talogalay sameynta neefsashadan. Iyo iyadoo keliya hal xusuusta ah ee raaxeysiga this neefsashada, barmaamij walbaa wuxuu kuuskuusaa candhuuf. Ka dib oo dhan, saxan noocaas ah ayaa si fiican u dhammaystiri doona oo kala duwanaan doona menu of dabaal kasta.
Sidee ha u hesho on boletus been ah: liiska boqoshaada aan la dabooli karin
Boletus ama bolt muddo dheer ayaa loo adeegsaday cuntada. Waxaa jira wax la cuni karo, xaalad ahaan la cuni karo iyo boqoshaada aan la dabooli karin. Qoyska boqoshaada waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee wakiilada la cuni karo - miro cad. In maqaalka ah waxaan ka hadli doonaa sida ay u muuqato gacanta, sida loo kala saaro inta u dhaxaysa boqoshaada caano ah oo caano ah oo caano leh, nooca boleta yihiin.
Sida loo qallajiyo likaha lohodka: talaabo talaabo tallaabo leh sawiro
Boqoshaada Oyster waa nooc caan ah oo qaali ah oo boqoshaada, kuwaas oo inta badan laga helaa roogaga. Kuwa doonaya inay si madaxbanaan u diyaariyaan boqoshaada lohodka qaabka la qalajiyey muddada dheer, waxaan kuu sheegi doonnaa sida saxda ah ee loo sameeyo, si ay dhadhanka kuugu daalaan mustaqbalka. Ma awoodaa in la qalajiyo boqoshaada lohodka? Waxaa jira talooyin tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo abuuro boqoshaada, boqoshaada caddaan ah iyo noocyada kale ee boqoshaada, laakiin waxaa jira macluumaad yar oo ku saabsan boqoshaada lohodka, maxaa yeelay alaabtan ma aha mid caan u ah qalajinta.